3 SIYAABOOD OO LOO WADAAGO GELITAANKA WI-FI IYADA OO AAN LA MUUJIN ERAYGA SIRTA AH - JILICSAN
3 siyaabood oo loo wadaago gelitaanka Wi-Fi iyada oo aan la muujin erayga sirta ah
Hey, waa maxay erayga sirta ah ee Wi-Fi? shaki la'aan waa mid ka mid ah su'aalaha loogu badan yahay ee adduunka oo dhan. Marka loo tixgeliyo raaxo, Wi-Fi hadda waxaa loo arkaa lama huraan waxaana laga heli karaa meel kasta, guryaha ilaa xafiisyada iyo xitaa meelaha dadweynaha. 'Wi-Fi bilaash ah' ayaa sidoo kale inta badan loo adeegsadaa xeelad ahaan in macaamiil badan lagu soo jiido kafateeriyada waxayna noqon kartaa arrin samaysa ama jabisa huteelada. Laakiin sidee ayaad u wadaagi kartaa Wi-Fi-gaaga adiga oo aan wadaagin eraygaaga sirta ah? Aan ogaano!
Kuwa ku hoos nool dhagaxa, Wi-Fi waa magaca loo qoondeeyay hab-maamuusyada shabakadaha wireless-ka ee loo isticmaalo in lagu bixiyo isku xirka internetka ee aalado badan isku mar iyo isku xirka degaanka. Tignoolajiyada Wi-Fi ayaa door wayn ka ciyaartay casriyaynta waxyaabaha maalinlaha ah, laga soo bilaabo TV-yada ilaa nalalka iftiinka iyo heerkulbeegyada, qalab kasta oo teknooloji ah oo aad ku aragto agagaarkaaga ayaa si uun u isticmaala Wi-Fi. In kastoo, inta badan shabakadaha Wi-Fi waxaa lagu xafidaa erayga sirta ah si ay uga fogaadaan kuwa soo dejinaya inay ku xirmaan oo ay jajabiyaan xawaaraha shabakadda.
In kasta oo qaar badan oo ka mid ah milkiilayaasha Wi-Fi-gu ay ka digtoonaadaan in aysan shaaca ka qaadin furaha sirta ah (si ay uga fogaadaan faafitaanka xaafadda oo ay uga hortagaan dadka aan loo baahnayn in ay ka faa'iidaystaan), waxaa jira dhowr siyaabood oo loogu talagalay iyaga si ay ugu oggolaadaan kuwa kale in ay ku xidhmaan shabakadooda iyaga oo aan waligood shaacin xaqiiqada dhabta ah. erayga sirta ah
Habka 1: Isticmaal badhanka WPS ee router
Habka 2: Samee shabakada martida
Habka 3: Samee QR Code
Saddexda hab ee aan ku sharxi doono maqaalkan waa - isku xidhka adoo isticmaalaya badhanka WPS, dejinta shabakada martida, ama koodka QR ee la iskaan karo oo si toos ah ugu xidhi doona iskaanka Wi-Fi.
WPS, Dejinta Ilaalisan Wi-Fi , waa mid ka mid ah borotokoolka amniga ee badan ee loo isticmaalo ilaalinta shabakadaha Wi-Fi (kuwa kale waa WEP, WPA, WPA2, iwm .) waxaana ugu horayn loo isticmaalaa in lagu sugo shabakadaha guriga maadaama ay aad u fudud tahay in la sameeyo marka loo eego WPA-ga horumarsan. Sidoo kale, habkani wuxuu shaqeeyaa oo kaliya haddii aad si jir ah u geli karto router-ka, sidaas darteed, qof shisheeye ah ma awoodi doono inuu ku xiro shabakada adiga oo aan ogeyn.
Inta badan router-yada casriga ahi waxay taageeraan tignoolajiyada WPS laakiin hubi inay diyaar tahay ka hor intaanad hore u socon. Soo jiid xaashida tilmaanta Google ama eeg dhammaan badhamada ku yaal routerkaaga, haddii aad hesho mid calaamadeysan WPS, kudos, routerkaaga runtii wuu taageersan yahay tignoolajiyada.
Marka xigta, waxaad u baahan doontaa inaad awood u siiso WPS (sida caadiga ah waxay ku shaqeysaa inta badan router-yada), si aad sidaas u sameyso, booqo cinwaanka IP-ga rasmiga ah ee sumadda routerkaaga, gal, oo xaqiiji heerka WPS. Samee raadinta degdega ah ee Google si aad u ogaatid cinwaanka IP-ga ee routerkaaga haddii aadan ka warqabin, waxaadna weydiisan kartaa adeeg bixiyahaaga internetka aqoonsiga gelitaanka.
Adigoo isticmaalaya liiska navigation-ka ee dhanka bidix, aad Qaybta WPS oo hubi in heerka WPS uu akhriyay karti. Halkan, waxaad sidoo kale dooran kartaa inaad dejiso PIN-ka caadiga ah ee WPS ama aad ku soo celiso qiimihiisii ​​caadiga ahaa. Ikhtiyaar kasta oo aad doorato, qor PIN-ka hadda ee isticmaalka dambe. Sanduuqa hubinta ee lagu joojinayo PIN-ka ayaa sidoo kale jiri doona ugu dambeyntii.
1. Qabo taleefankaaga oo fur Dejinta codsi.
Waxaa jira siyaabo badan oo qofku u furi karo Dejinta , ama hoos u soo jiid bartaada ogeysiiska oo guji sumadda cogwheel ama billow menu app (adiga oo kor u qaadaya shaashadda guriga) oo dhagsii astaanta codsiga.
2. Iyadoo ku xidhan soo saaraha telefoonka iyo UI, isticmaalayaashu waxay heli doonaan a shabakadaha iyo goobaha internetka qayb ama Wi-Fi & Dejinta intarneedka . Si kastaba ha ahaatee, u gudub jidkaaga bogga dejinta Wi-Fi.
3. Taabo Settings horumarsan .
4. Shaashada soo socota, ka raadi Ku xidh badhanka WPS doorasho oo ku dhufo.
Waxaad hadda heli doontaa pop-up ku weydiinaya inaad riix oo hay badhanka WPS on your Wi-Fi router, markaa horay u soco oo samee ficilka loo baahan yahay. Taleefankaagu si toos ah ayuu u ogaan doonaa oo ku lammaanayn doonaa Shabakadda Wi-Fi. Ka dib markaad taabato Connect by WPS Button option, telefoonku wuxuu raadin doonaa shabakadaha la heli karo ilaa 30 ilbiriqsi. Haddii aad ku guul dareysato inaad riixdo badhanka WPS ee router-ka gudaha wakhtigan, waxaad u baahan doontaa inaad mar kale taabato Connect by WPS badhanka ikhtiyaarka ah.
Sida hore loo sheegay, router-yada qaarkood waxay leeyihiin a WPS Pin xiriir la leh naftooda, iyo isticmaalayaasha waxaa lagu soo dayici doonaa inay galaan PIN-kan marka ay isku dayayaan inay ku xiraan habkan. The PIN-ka caadiga ah ee WPS waxaa laga heli karaa sticker inta badan waxaa lagu dhejiyaa saldhigga router.
Fiiro gaar ah: In kasta oo ay fududahay in la habeeyo, WPS ayaa sidoo kale si weyn loogu dhaleeceeyay ammaanka liita ee ay bixiso. Tusaale ahaan, hacker-ka fog waxa uu ku ogaan karaa WPS PIN-ka dhowr saacadood gudahood isaga oo wata weerar xoog-ku-dhiigle ah. Sababtan awgeed, nidaamka deegaanka Apple ma taageerayo WPS, iyo Android OS ayaa sidoo kale joojiyay ' Ku xidh WPS ' muuqaalada post-Android 9.
Sidoo kale Akhri: Hagaaji Android Ku Xidhan WiFi Laakiin Ma Jiro Internet
Maadaama WPS aysan taageerin inta badan aaladaha casriga ah, doorashadaada xigta ee ugu fiican ayaa ah inaad dejiso shabakad sare oo furan si aad isaga ilaaliso in booqde kasta oo cusub ku weydiiyo erayga sirta ah. Inta badan router-yada ayaa kuu oggolaanaya inaad abuurto shabakad marti ah, habka abuurkuna waa mid fudud. Sidoo kale, in dadka soo booqda ay ku xidhmaan shabakada martida waxay hubinaysaa in aanay marin u helin agabka & faylasha la wadaago shabakada aasaasiga ah. Sidaa darteed, amniga iyo sirnaanta shabakadaada aasaasiga ah ayaa sii ahaan doona. Ku wadaag Wi-Fi adiga oo aan wadaagin Password-ka waxaad u baahan tahay inaad dejiso shabakad martida adoo isticmaalaya routerkaaga:
1. Bilaw biraawsarkaaga webka ee aad door bidayso, geli ciwaanka IP-ga ee router kaaga gudaha bar URL, oo ​​taabo geli
2. Geli xisaabta magaca iyo erayga sirta ah si aad u gasho Qaar ka mid ah, ereyga 'admin' waa labadaba magaca akoontada iyo erayga sirta ah halka kuwa kalena ay u baahan doonaan inay la xiriiraan ISP-gooda aqoonsiga.
3. Marka aad gasho, dhagsii Dejinta wireless joogo bidix ka dibna on Shabakadda Martida .
4. Daar Shabakadda Martida adiga oo calaamadaynaya sanduuqa ku xiga.
5. Geli magac la aqoonsan karo gudaha Magaca (SSID) sanduuqa qoraalka oo deji a Furaha sirta ah ee bilaa wireless haddaad rabto. Waxaan kugula talineynaa inaad magaca u dejiso ' Magaca shabakadaada aasaasiga ah - Martida martidaada si ay si fudud u aqoonsadaan oo ay isticmaalaan furaha guud sida 0123456789 ama midnaba.
6. Marka aad habayso shabakada martida, dhagsii Badbaadin badhanka si aad u abuurto shabakada Wi-Fi martida kale.
Dhaqangelinta habkan waxa laga yaabaa in ay u noqoto mid iska yeelyeel ah, laakiin sidoo kale waa habka ugu habboon in la sameeyo la wadaag marinka Wi-Fi adigoon muujin eraygaaga sirta ah . Dhammaanteen waxaan ku aragnay looxyada QR-yada yar ee miisaska kafateeriyada iyo qolalka hoteelka, annagoo ku sawirannayna iyaga oo isticmaalaya abka QR code scanner ama xitaa codsiga ku dhex-jira aaladaha qaarkood ayaa kugu xiraya Wi-Fi-ga la heli karo. Abuuritaanka koodka QR ee Wi-Fi guud ahaan waa faa'iido haddii meel ay soo jiidato dad badan oo dhaq-dhaqaaq badan, shabakadaha guriga, aad bay u fududahay in si toos ah loo galo erayga sirta ah.
1. Booqo mid kasta dhaliye QR Mareegta sida Soosaaraha Koodhka QR ee Bilaashka ah iyo Abuuraha ama WiFi Code Generator.
2. Geli kaaga Magaca Shabakadda Wi-Fi, Password , dooro sirta/nooca shabakada oo dhagsii Abuur koodka QR.
3. Waxaad si dheeraad ah u habayn kartaa muuqaalka QR code adiga oo beddela cabbirkiisa iyo xallintiisa, ku dara a 'Igu sawir' ku wareegsan, wax ka beddelka midabka & qaabka dhibcaha iyo geesaha, iwm.
4. Marka aad haysato QR code oo loo habeeyey sidaad jeceshahay, dooro nooca faylka, oo soo deji koodka QR-ka.
Ku daabac koodka warqad maran oo dhig meel ku habboon halkaas oo dhammaan booqdayaashu ay iskaan karaan oo si toos ah ugu xidhmaan shabakadda WiFi adigoon ku dhibin erayga sirta ah.
Sida loo soo celiyo Astaamaha App-ka ee la tirtiray ee Android
3 siyaabood oo loo dejiyo fariimaha codka ee Android
Sida Looga Furo Lambarka Taleefanka ee Android
Markaa waxay ahaayeen saddex hab oo kala duwan oo aad isticmaali karto si aad ula wadaagto Wi-Fi adigoon muujin erayga sirta ah ee dhabta ah , inkastoo, haddii ay tahay saaxiibkaa oo ku weydiinaya, sidoo kale waxaa laga yaabaa inaad ka tanaasusho.